अवैध सम्बन्ध लुकाउन देवरको हत्या, शव गाड्न लैजाँदा प्रहरीको फन्दामा ! | Ratopati
अवैध सम्बन्ध लुकाउन देवरको हत्या, शव गाड्न लैजाँदा प्रहरीको फन्दामा !
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeचैत २५, २०७६ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ । अवैध सम्बन्ध लुकाउन महोत्तरीको पर्साकी सगिरा खातुनलाई देवरको हत्या अभियोगमा प्रहरी खोरमा पुर्याएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका अनुसार उनी १५ दिनदेखि प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा छिन् ।
सगिराले आफ्नै १३ वर्षीइ देवर मजिवुल अन्सारीको घाँटी थिचेर हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । महोत्तरी प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीका अनुसार देवर मजिवुलको औलाले घाँटी थिची हत्या गरिएको हो ।
सगिरा चैत ९ गते मध्यरातमा प्रेमीलाई आफ्नै घरमा बोलाएर यौन क्रियाकलापमा लिप्त थिइन् । सोही अवस्थामा उनीहरुलाई देवर मजिवुलले देखेका थिए ।
विगत २ वर्षदेखि सगिराका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा खाडीमुलुकमा छन् । श्रीमान विदेशमा रहेको बेला यौन प्यास मेटाउन प्रेमीसँग एकवर्ष पहिलेदेखि यौन सम्बन्ध बढाएकी थिइन् ।
आपत्तिजनक अवस्थामा देवर मजिवुलले उनीहरुलाई देखेपछि सोही दिन राति सगिराले प्रेमिलाई भगाएकी प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको एसपी अधिकारीले बताए ।
एसपी अधिकारीका अनुसार सगिराको प्रेमी भगाउन देवर मजिवुलले पनि सहयोग गरेको पाइएको छ । त्यसपछि भाउजु र देवर आ–आफ्नै कोठामा गएर सुतेका थिए ।
सोही दिन राति उनीहरुबीच २७ मिनेट लामो फोनमा कुराकानी समेत भएको थियो । सगिराले प्रेमीसँग २७ मिनेट लामो कुरा गरेको कलडिटेल प्रहरीले पत्ता लगाएको एसपी अधिकारीले बताए ।
अवैध सम्बन्धको पोल खुल्ने डरले फानेमै देवर मजिवुलको हत्या गर्ने योजना बनेको हुनसक्ने एसपी अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘सोही अनुरुप सुतेको बेला मजिवुलको घाँटी थिचेर हत्या गरिएको हुनसक्छ ।’
हत्यापछि मजिवुलको शव खाल्डो खनेर गाड्न लैजाँदै गर्दा सगिरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । कवरगाहा भन्ने ठाउँमा मजिवुलको शव लैजाँदै गर्दा सगिरालाई पक्राउ गरिएको एसपी अधिकारीले पुष्टि गरे ।
महिलाको प्रेमी फरार रहेको र खोजीकार्य जारी रहेको एसपी अधिकारीले बताए । ‘भागेर भारतमा लुकेको खार छ, खोजी कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने ।
सगिरा र उनको प्रेमिमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
तत्काल पठनपाठन सुरु गर्न शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरुले दिए यस्ता सुझाव
प्रदेश २ सरकारको बजेट : जनतालाई होइन, सत्ता टिकाउने उद्देश्य !
प्रदेश ५ मा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ पुग्यो
कोरोनाबाट थप एक जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या १० पुग्यो
प्रदेश नम्बर १ का ७८ जनाले जिते कोरोना, आजै ३० जना डिस्चार्ज
कोरोना राहत कोषमा पोष्ट बहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानको एक लाख सहयोग
सर्वोच्चमा थप ८ प्रकारका मुद्दामा सुनुवाइ हुने
अधिकांश सङ्क्रमितमा कोभिड-१९ को लक्षण छैन
रौतहट : बजार खोल्न दिने स्थानीय प्रशासनको निर्णय
कोरोना बीमाको योजना स्थगित, बिक्री भएको बीमालेख के हुन्छ ?
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडद्वारा कलाकर्मीलाई सहयोग
लकडाउनलाई खुकुलो पार्न चेम्बरका अध्यक्षको सुझाव